look so delicious… i wanna eat too and i will try it very soon 🙂
ကျွန်တော်ကတော့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ဆိုရင်တွေ့တဲ့နေရာ စားတယ်
Me too.. I like it very much 🙂
Plz try it, friend!! 😀
မချော ကိုယ်တိုင်လုပ်စားရတာ နည်းနည်းတော့ လက်ပေါက်ကပ်ပေမယ့်။ အိမ်မှာ လုပ်စားတော့ စိတ်ကြိုက်စားရတောပေါ့.. 😀
ဟုတ်ကဲ့ပါ မ။ 😀
အားပေးလို့ ကျေးဇူးပါ ညီမ… 😛
တို့ဟူးနွေးက အိမ်မှာ လုပ်စားရတာ လုပ်ရတာ နည်းနည်း လက်ပေါက်ကတ်ပေမယ့် စားလို့ ပိုကောင်းတယ်.. 😀
TunTun Kyaw says:
ကျေးဇူးပါ အန်တီတင့်.. 🙂
ခုလို ဖြေကြားပေးလို့ ကျေးဇူးပါနော်။ ၀တ်ရည်လည်း ဒီကျိုနည်းလေးကို မှတ်ထားလိုက်မယ်.. 🙂
MYAT K KHAINE says:
If You don’t mind, could you tell me that how to call ကုလားပဲအစိမ်းမှုန့် in English, Please?
ကုလားပဲအစိမ်းမှုန့် = Gram Flour လို့ ခေါ်ပါတယ် .. 🙂
အင်း ဒီနည်းလေးလည်းစိတ် ၀င်စားစရာဘဲ ရှမ်းပြည်ကတိုဖူး အရသာကအရမ်းနူးညံ့တယ်
တိုဖူးသားကိုက နူးညံ့တာ လေ ..
maung myintswe says:
I have planning to write Myanmar, English recipes. But I don’t have free to time to write English. But future I will try to do.. 😀
အမရေ…အမချက်ပြုတ်နည်းလေးတွေကိုကြည့်ပြီး ….cooking ရတာအဆင်ပြေတယ်..ကျေးဇူးဘဲ အမရေ…..ဒီ site ကိုလဲအမြဲကြည့်ပြီး ၁ခုခုလုပ်စားဖြစ်တယ်..အသစ် အသစ်တွေလဲ ထပ်ပြီးအများကြီးတင်ပါလို့နော်………..ကျေးဇူးပါ ….^^^^^
ဟုတ်ကဲ့ တင်ပေးပါ့မယ် ညီမရေ.. ကျေးဇူးပါနော်
gram flour nae တူတူပဲ၊ Plz try it sis.. Thanks also.. 😀
Min Thar Gyi says:
Thanks also sis yay!!! 🙂
တချို့က ကျိုပြီသား တို့ဟူးကို ပြန်ချေပြီ ပြန်ကျိုတယ်။ အဲဒီလို လုပ်ရင် ဆိုင်အတွက် ပိုလွယ်လိမ့်မယ်… 🙂
Plz try it, sis 🙂
ayan like tal……….very thank ma ma……….
အရမ်းကောင်းတဲ့ဆိုဒ်ကလေးပါဗျာ… အခုလိုဖတ်ခွင့်ရတဲ့ အတွက်လည်း အရမ်းလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ.. admin နဲ့ဆက်သွယ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရပေါ့။
I will send mail to you. Thanks bro 🙂
အကြိုက်ဆုံးအစားအစာ ထဲမှာ ပါတယ်.. ရှမ်းပြည်မှာတော့ အီကြာကွေးနဲ့လည်းရော စားလေ့ရှိတယ်
ကျေးဇူးပါ ညီမ ၀တ်ရည်
တိုဟူးနွေးကို ကြက်သွန်ပင် အစား နံနံပင် နဲ မုန်ညင်းချဉ်တွဲစားတာ ပိုအဆင်ပြေ တယ်ထင်တယ် နော် ။ ရှမ်းပြည်မှာတော့အဲ့လိုစားကျတာများတယ် ၀က်ခေါက်ကြော်နဲပေါ့ ။။။
ကိုသီဟ နဲ့ မ၀တ်ရည် တို
မ၀တ်ရည် နဲ့ ကိုသီဟ တို့ရေ ၊ ဆရာလုပ်တယ်လို့မထင်ပါနဲ့ ၊ ချက်ပြီးသားပြန်ချေပြီးကျိုရင်
အခဲတိုင်းဘဲဖြစ်နေမယ် ၊ပြန်ပျော့မသွားတော့ဘူး ၊ အကောင်းဆုံးကတော့ချက်ပြီးမအေးခင်
၀တ်ရည်ရဲ့ဆိုဒ်ကို အမြဲအားပေးနေတဲ့ လားရှိူးသား
မဝတ်ရည်ရေ ဆန်စီးခေါက်ဆွဲကို အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲရှင့်
မြန်မာမှာ မဟုတ်လို့ ရှာဝယ်ခြင်လို့ပါ
ဆန်စီးခေါက်ဆွဲ = dry shan noodle
မ၀တ်၇ည်အ၇မ်းတော်တယ် အ၇မ်းအားကျတယ် ချက်စားကြည်.မယ်နော်
လုပ်စားကြည့်ပါနော်.. sis.. Thanks 😀
may wah aung says:
Khaing April says:
Dear Admin, I’d like to post some photos and cooking directions relating to Shan/Thai foods for my Kyaing Tong page from your blog! I’ll surely give special credits! Thank you so much in advance! You can please check out my page 🙂
Sorry, here is the correct link https://www.facebook.com/pages/Kyaing-Tong/255015097871554 :O
Wutyee Food House: http://www.wutyeefoodhouse.com လို့ credit ပေးရင်ကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. Plz share 🙂
Thanks so much, sis! I surely will do. 🙂
Plz try 🙂
ဆန်းစီး ခေါက်ဆွဲ အစားထိုး လုပ်လို့ရတာတော့ မရှိဘူး sis… ဆန်းစီးကို ခေါက်ဆွဲခေါက်ဆိုရင် အထားခံမယ် ထင်တယ် sis
Myat Htut says:
Thanks Ma Wutyee 🙂
Ma wutyeedsite ko myin like tar nai su myat lo lazybone tg chat sarr chin sate tway pyit lar tal
sar yin sar yin fatty phit lar yin toke kha !!!
haa.. Thanks sis 😀
I’ve never had it before till recently. I love it. I am glad that you havearecipe for it. I am ready to try it out for dinner tonight. Thanks Wutyee.
လုပ်စားကြည့်ပါနော်.. Welcome 🙂
a ma wutyee yay nyi ma dotaku pel phin sin chat phoat nay par pi. kyi lite chat lite nat ta kar ma kitchen htel ma win bu tarama wutyee kyay zoo khaunt kitchen htel win ya dar phaw nay par thi. ta char sar chin tar tway ko lel sait ku yin pi pait yat tway mar chat sar oo mal naw thi lar? heeee.a yan ko kyay zoo tin tal naw. nyi ma yout kyar ka lelama ko kyay zoo par dat.
haaa Thanks also par sis… 😉
Ama yay noodles ka Glutinous rice noodles do yin yaw ya lar ma ti bu??
ပဲငပိက မြန်မာပဲငပိလား။ တရုတ်ပဲငပိလား။ ပဲငပိအချိုလား အစပ်လား ဝတ်ရည်
တရုတ် ပဲငပိ နဲ့ ချက်ထားတာပါ.. 🙂
ကြိုက်မှကြိုက်တို့ဟူးပျော့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခုလိုသေချာရှင်းပြပီးတင်ထားတဲ့အတွက် …နောက်တစ်ခုပြောချင်တာက ကီလိုတို့ ဂရမ်တို့ထက်ကို တစ်ဆယ်သားတို့ တစ်ပိသာတို့ပြောပြရင်ပိုပီးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်